वैकल्पिक रुट र सडक सञ्जालमा जोड | गृहपृष्ठ
Home समाचार वैकल्पिक रुट र सडक सञ्जालमा जोड
वैकल्पिक रुट र सडक सञ्जालमा जोड
निक्कीको नेतृत्वमा पुनः सौर्य शमशेर राणा
काठमाडौं । सडक सञ्जाल विस्तार, वैकल्पिक रुटको खोजी र पूर्वाधार निर्माण भएमात्र आर्थिक गतिविधि सहज हुने सम्बद्ध सरोकारवालाले बताएका छन् । मङ्गलवार काठमाडौंमा नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य सङ्घले गरेको कार्यक्रमका सहभागी व्यवसायीले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको दिगो विकासका लागि आर्थिक सामाजिक चुनौतीहरू सम्बोधन हुनुपर्ने बताए । उपाध्यक्ष डा. वाग्लेले नेपालको दिगो विकासको पहिलो महत्त्वपूर्ण चुनौती सडक सञ्जाल रहेको भन्दै सो चुनौती सम्बोधन गर्न नेपाल–भारत व्यापारिक नाका वीरगञ्जदेखि नेपाल–चीन नाका किमाथाङ्का जोड्नेगरी सडक सञ्जाल विस्तार हुनुपर्ने बताए ।
आयोगले आउँदा दिनमा दीर्घकालीन महत्त्वका योजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्दै उनले देशको अस्थिर राजनीति निर्वाचनपछि स्थिर हुने र प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्रिने बताए । डा. वाग्लेले देशको कृषि, पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रमा अत्यधिक लगानी आवश्यक रहेको भन्दै उत्पादन उद्योगको लागत घटाउन सडक सञ्जालको आवश्यकता औंल्याए । नेपालका लागि भारतका राजदूत मञ्जीव सिंह पुरीले नेपालले आर्थिक समृद्धिका लागि वैकल्पिक बाटाहरू खोल्नुपर्ने बताए । उनले वर्षेनि नेपालगञ्जबाट मानसरोवर जाने तीर्थयात्रीहरूको उदाहरण दिँदै नेपालको पर्यटन उद्योग बलियो बनाउन मुक्तिनाथ–जोमसोम कालीगण्डकी कोरिडोर निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताए । पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारका लागि पनि वैकल्पिक रुटको खोजी हुनुपर्ने भन्दै राजदूत पुरीले भारत सरकारले कुशीनगर–वीरगञ्ज रेलवे सेवा र जोगवनी विराटनगर व्यापारमार्ग विस्तारलाई चासोका साथ अगाडि बढाउन लागेको बताए ।
त्यसबाहेक चाँदनी–दोधाराको ड्राइपोर्टले पनि नेपाल तथा भारत दुवै देशको व्यापारलाई विस्तार गर्ने धारणा राखे । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (एफएनसीसीआई)की अध्यक्ष भवानी राणाले नेपालमा आर्थिक क्रियाकलाप बढेको भन्दै अवसरको सदुपयोग गर्न भारतले नेपालमा लगानी बढाउनुपर्ने बताइन् । उनले नेपाललाई भारतले भारूमा भएको निर्यातलाई पनि डलरमा हुने निर्यातसरह मान्यता दिएर निर्यात प्रवद्र्धनमा सघाउनुपर्ने धारणा राखिन् । अध्यक्ष राणाले यतिबेला नेपालमा नीतिगत पुनरवलोकन र आम निर्वाचन भइरहेकाले लगानीको वातावरण बनेको भन्दै भारतीय लगानीकर्तालाई ठूलो लगानी गर्न आग्रहसमेत गरिन् । कार्यक्रममा व्यवसायी शशिकान्त अग्रवाल, सौर्य शमशेर राणालगायतले बोलेका थिए ।
निक्कीको नेतृत्वमा पुनः राणा
नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य सङ्घ (निक्की)को २३औं वार्षिक साधारणसभाले अध्यक्षमा पुनः सौर्य शमशेर राणालाई चयन गरेको छ । अघिल्लो कार्यसमितिलाई पनि राणाले नै नेतृत्व गरेका थिए । मङ्गलवार काठमाडौंमा भएको कार्यक्रममा निक्कीले आउँदो २ वर्षका लागि राणाको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय कार्यसमिति चयन गरेको हो । कार्यसमितिका लागि ११ जना व्यवसायीले उम्मेदवारी दर्ता गराएकामा डाबर नेपालका आदित्य भार्गव र आईएमई अटोमोटिभ्सका हेमराज ढकालले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएका थिए ।